VIDEO: Qaabkee ayeey dhalinyada Muqdisho ugu daawadeen caasimada kulankii Galabta ee xulkeena qaranka Soomaaliya?? – Gool FM
(Muqdisho) 10 Sebt 2019. Xulalka qaranka Zimbabwe ayaa guul kaga gaaray Soomaaliya 3-1 kulankii lugta labaad ee is reeb-reebka koobka adduunka ee 2022-ka lagu qaban doono dalka Qatar.
Xulkeena qaranka Soomaaliya ayaa awoodi waayay inuu u gudbo kulamada xiga ee isreeb-reebka koobka adduunka 2022-ka lagu qaban doono dalka Qatar, kaddib markii labadii kulan ay wada ciyaareen Zimbabwe cel celis ahaan loogu awood sheegtay 3-2.
Kulankii maanta ee lugta labaad wuxuu ahaa kulan qof walba oo Soomaali ah uu sugayay, maadaama wiilasheena Ocean Stars ay guul ka heleen kulankii lugta hore, kaddib markii ay kaga adkaadeen Zimbabwe 1-0, kulankaasoo lagu ciyaaray dalka Jabuutti, balse kulankii maanta waxay awoodi waayeen inay ku celiyaan, ama ugu yaraan ay ciyaarta ku dhamaato barbaro.
Haddaba muuqaalka hoose kaga boggo sida uu isku badalay dareenka Shacabka musqdisho, kaddib guuldaradii Zimbabwe: